अधुरो प्रेम – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ जेष्ठ १७, शनिबार ०१:३७ गते
बन्द, हडताल, बेरोजगारी, असुरक्षा र लोडसेडिङले देशको अवस्था झन–झन खस्कँदै थियो । लत्रिएको फूलसरि प्रेमका वाचा–कसम विज्ञानको स्मृतिपथमा आइरहेको थियो । ऊ सपना देख्दै थियो सुन्दर भविष्यको ।
एक दिन विज्ञानले विदेश जाने सोच ग¥यो । देशमा बेरोजगारी समस्याले देशका युवा दिन प्रतिदिन पलायन हुँदै गरेको उसले देखेको
थियो । विज्ञानले निशालाई फोन ग¥यो तर फोन लागिरहेको थिएन । निशा र विज्ञान सानै देखिका साथी थिए । उनीहरुमा एक प्रकारको नजानिँदो माया बसेको थियो ।
विज्ञानले फोन रि–डाइल ग¥यो । विज्ञान फोनमा भनिरहेको थियो ‘के छ खबर सञ्चै छ्यौ, निशा मेरो विदेश जाने दिन आयो म टाढा भए पनि म तिमीसँगै हुनेछु, हामी बीचको नाता अझै गाढा हुनेछ ।’
विज्ञान टोलाएजस्तै देखियो । सिलिङ पंखा घुम्दै थियो । माकुराले जालो बुन्दै थियो । कोमलकोटीले भित्तामा घर बनाउँदै थियो । निशासँग कुरा गर्दागर्दै उसको मुहार निन्याउरो भएको थियो । फोन राखिसकेपछि सायद विज्ञान निशाले भनेको कुरामा घोत्ली रहेको थियो । म तिमीबिना बाँच्न सक्दिन, निशा फोनमा रोएकी आवाजले उसलाई नरमाइलो बनाइरहेको थियो ।
विज्ञानको मनभरि अझै पनि निशा थिइ तर उसको मनले नमानेपछि ऊ सिस्ने भञ्ज्याङ्ग गएर निशालाई भेट्ने निर्णय ग¥यो ।
पहाडको अग्लो उचाइ वरिपरि हरियाली र टाँकीे फुलिरहेको थियो । निशाको घरछेउ विज्ञान ढुँगे धाराको पानीले हातमुख धोइ निशाको घर पुग्यो अनि मुस्कुराउँदै भन्यो “ निशा म तिमीलाई भेट्न आएको ।”
निशा पिंढीमा हरियो पुड्का–पुड्की मकै छान्दै थिइ । शायद मकैको घोगा सुकेका ले होला ।
झल्याँस्स आफ्नो मान्छे अत्तोपत्तो नपाइ अगाडि आइ
बोलाउँदा उनी झसङ्ग भइन् । पुलुक्क मुखतिर हेर्दै भनी “कालु थाहै नदिई आउने हो त ?”
“ कति भेट्न र देख्न मन भएर आको म जाउँ त” विज्ञानले भन्यो ।
निशाले फेरि भनिन् “नजिस्किनु न आउनुस् बसौं” । निशा घरभित्र गइ विज्ञान पिंढीमा रहेको खाटमा बस्यो । निशाले अंखोरामा पानी र मही ल्याएर भनी “पानी कि मही लिनुहुन्छ ?
विज्ञानले भन्यो ‘म त तिम्रो…।’
संयोग नै मान्नुपर्छ त्यस दिन निशाको बा–आमा बेसी खेत जानुभएको थियो । दुबैले पानी र मही खाँदै जवानीसम्मको तीता–मीठा गफ गर्दै गए । निशा भन्दै थिइ “सकभर मिलेसम्म यतै राम्रो काम गरौं, हजुरको साहै्र सम्झना र न्यास्रो लाग्छ ।”
“ मैले पनि यस्तै सोच्थें, तर….” विज्ञानले जवाफ दियो ।
त्यसपछि निशाले मकै खोस्ट्याइ, विज्ञानले मकै छोडाउँदै गयो । निशाले भनी–‘भो हजुरको हातमा ठेला उठ्ला, मै छोडाउँछु नि हजुरलाई के को दुःख ?’
विज्ञानले पनि भन्यो “सुख–दुःखसँगै साँटासाँट गर्ने सँगै जिउने भनेको हैन ?”
निशाले थोरै तेल र नुन राखेर दुई घान मकै भुटी । अलौटो मकै दुबैले मीठो मान्दै खाए ।
विज्ञान घरतिर फर्किन खोज्दै थियो । तर दुबैलाई एकआपसमा छुट्टिन गाह्रो पर्दै थियो । अघिसम्म हाँसी खुसी र उज्यालो मुहार मलिन देखिन्थ्यो । दुबैले विदाइका हात हल्लाए । निशा विज्ञानलाई परसम्म हेर्दै थिइ । विज्ञानले पनि फर्की–फर्की हेर्दै थियो । आकाशमा कालो बादल मडारिँदै भदौरे पानी दर्कंदै थियो । विज्ञानले छाता ओढ्यो । उता निशाले अघिसम्म आफ्नो सामु रहेको मान्छेलाई देख्न सकिन । घर पुगेपछि थाहा भयो विज्ञान दुई दिन पछि विदेश उड्ने भनेर ।
निशा अस्तिमात्र ऋषि पञ्चमीमा निशा उनैलाई पाउँ भन्दै ब्रत बसेकी थिइन् रे । पहिला बेलाबेलामा फोन र मिसकल गर्थी अब त त्यही पनि न पाउने भइ । गाउँघरमा दुःख सुख गरेर उच्च शिक्षा पास गरेको विज्ञान जेहेन्दार पनि थियो । म्यान पावरबाट भीसा लगाउँदा सुपरमार्केटको अफिस
इन्चार्ज भनेर काम तोेकेको त भेडा चराउने गोठालोमा काम परेछ । त्यही पनि पहिला तोकिएभन्दा कम पारिश्रमिकमा ।
साहुको ऋण सम्भ्mयो सयकडा पाँच ब्याजदरमा ल्याएको । विज्ञान टोलाउन थाल्यो । के गरौं कसो गरौंको उपाय हरप्रकार सोच्यो आखिर जालहारीले जालमा पारेको माछोसरह थियो ऊ । किनकि परदेशमा आएको मान्छे आफ्नो पासपोर्ट साहुको दराजमा थियो । उसले केही उपाय देखेन । मनमा विभिन्न पीडाबोध ग¥यो । आफैले–आफैलाई धिक्का¥यो । मनभरि र गहभरि आँसु पार्दै मनमनै भन्यो “गाँउको खोरिया बारी खन्दै अन्न ला’को भए, आफ्नै बारीको घाँस स्याउला खुवाई आठ–दस वटा गाईभैंसी पालेको भए, विदेशमा आएर रुनुपर्ने थिएन । उसले आफ्नो घरपरिवार र आफ्नो हृदय चलायमान बनाउने प्यारी निशालाई सम्झ्योे र घोप्टो परेर रुँदै रात बितायो ।
सोझो जनताको छोरो आफ्नो देशमा त देश र जनतालाई नेताले ठगे ठगे त्यो भन्दा बढी ठग्ने म्यानपावर र विदेशी दलाल÷एजेन्ट नै रैछन् भनी भक्कानिँदै रुँदै थियो । विदेशमा पनि एउटा काम देखाइ अर्कोमा लगायो । उसले फेरि सोच्यो “वीर गोर्खाली, विश्वसामु एकपल न झुकेको हाम्रा पुर्खालाई समेत यी नेताले निर्वस्त्र पार्दै इज्जत गुमायो, नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा आँच
पु¥यायो । सायद हाम्रा नेताले देशमा रोजगार दिन सकेको भए यस्तो हुने थिएन कि ।”
उता निशा आफ्नो मान्छेको फोन कहिले आउला भन्दै थिइ । यता विज्ञान आफ्नो दुःखको कुरा आफ्नो परिवार र निशालाई कसरी भनुँ भन्दै थियो । निशाले जाने बेलामा भनेकी थिइ “हजुर विदेशबाट आएपछि बिहे गरौँला ।”
विज्ञान विदेश उडेको छ महिनापछि घरमा फोन ग¥यो । आमा तरकारी केलाउँदै थिइन् । बाबा खोरमा बाख्रा हुल्दै थिए । छोराको फोन आउँदा बा–आमा खुसीले गद्गद् थिए । विज्ञानले आफ्नो दुःख घरमा पीर पर्ला सोची नराम्रो केही बताएन ।
बूढी आमाले फोनमा भनिन् “आफ्नो ज्यानको ख्याल राखेस् बाबु” । बाबाले पनि फोन लिँदै भन्नुभयो “काम राम्ररी गर यहाँ सन्चै छांै, हाम्रो चिन्ता नगर छोरा मान्छे भएपछि हरेक मोडमा धैर्य भइ विचार पु¥याउनुपर्छ ।”
बाबाको भनाइले विज्ञानको ढक्क मन फुल्यो । उसले मनमनै दुःख पाएको सम्झियो । भक्कानिँएको मन सम्हाल्दै अलि मन बुझाउने अाँट ग¥यो ।
पछि उसले निशालाई फोन ग¥यो । निशाले फोन उठाइन् “हेल्लो……हेल्लो” निशाले भनी । फोन विच्छेद भयो । फेरि फोन रि–डायल ग¥यो । “हेल्लो….हेल्लो…… हेल्लो” निशाले भनी । उताबाट आवाज आयो “निशा म विज्ञान साउदी बाट सञ्चै छ्यौ अनि बाबा–आमा ?”
निशा खुसी भइ उही आफ्नो मान्छेको फोन, दुबैले सन्चो विसञ्चो सोधे । मनभित्रका सबै कुरामा एक–अर्काबीच हराए । गएको दशैंमा विज्ञानले टीका आफूले लाएँ अनि तिम्रो फोटोलाई लाइदिएँ भन्दै थियो । निशा हजुरको फोटो नहेरेको र सिरानीमा नराखेको दिन छैन भन्दैथिइ ।
विज्ञान पनि चाँडै फर्की स्वदेशमा नै केही गर्ने संकल्पका साथ आउँदै थियो । निशाका नजिकका आफन्तले हुर्के बढेकी छोरी धेरै दिन राख्न हुँदैन, सल्लाह गर राम्रो केटा छ, अमेरिकामा डिभी पाएको । निशाको र उनको विवाह गराइ दिउँ भन्दै प्रस्ताव ल्याए ।
निशाको ममी कुँढेमा दुध चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । निशाको बाबा अगेनाको छेउ आएर बस्दै भन्नुभयो “के गर्ने त निशाकी ममी ? ममीले भन्नुभयो– हुन त कुरा ठीकै हो, हुन्छ नि एकपटक यसो छड्के देखाउँ छोरीको विचार नि थाहा पाइन्छ ।
बाबा ममीको सल्लाह भयो । एकदिन केटा छड्के हेर्न भंैसी किन्ने निहँुले आउँदै थियो । केटा र आफन्त आए । केही समयपछि उनीहरु
फर्किए । निशा भर्खरै कुटमिराको स्याउला र घाँस काटेर आएकी
थिइन् । बाबा–आमाको कुरा सुन्दा निशा छाँगाबाट खसे झैं भइन् । केही सोच्न सकिनन् वा कुन्नी के सोचिन् । हिँड्न लाग्दा अचानक भित्तामा ठोक्किन पुगिन् र भुँइमा लडिन् । बा–आमा अतालिँदै अस्पताल पु¥याउनुभयो । छिमेकीको साथमा ।
उनको छिनछिनमा स्याँ–स्याँको आवाज डरलाग्दो थियो । डाक्टरले मुटुको समस्या र अक्सिजनको मात्रा पनि कम देखिएको बताए । निशाको अवस्था नाजुक भएकोले उनका आफन्त र ईष्टमित्र अस्पताल आउने क्रम बाक्लो थियो । निशाको दाजु पनि अस्टे«लियाबाट आउनु भयो । बहिनीको अवस्था हेर्दै उहाँको अनुहार चूक घोप्ट्याए झैं भयो । निशाले विस्तारै शरीर हलचल गरिन् अनि घाँटी उचाल्न खोज्दै विज्ञान… भनिन् । जुन उनको मसिनो आवाजले इंगित गर्दथ्यो । छोरीको अन्तिम अवस्था हो कि भन्दै उनकी आमाको आँखा ओभानो भएको थिएन् । उनको आँखाको कोष र पुरै मुख फुलिएको थियो । रुँदा–रुँदा आँखा रातो भएको थियो । बाबाले निशाको ममीलाई संयमित र धैर्य हुन भन्दैथिए ।
छोरीले अन्य व्यक्तिलाई केही भनिन, बरु विज्ञान खोजेझैं लाग्यो । उनको अवस्था सुधार भएको थिएन । निशाको बाबाको मानसपटलमा त्यो कुरा फनफन्ती घुम्न लाग्यो । किनकि विज्ञानलाई भेट्ने अन्तिम चाहना थियो कि बुबाले सम्झें । विज्ञान उनको घरमा बेलाबेलामा आउने साथी भएकोले चिन्जान पनि थियो । बाबाले विज्ञानको घरमा फोन गर्नु भयो । उनलाई कुनै किसिमले सम्पर्क हुन सकेन बरु आउँदैछ अरे भन्ने थाहा पाइयो तर कुन मितिमा केही जानकारी भएन ।
बिहान विज्ञानको घरको बार्दलीमा बसेर कागले काँ..काँ..काँ गर्दै करायो । विज्ञानको आमाले शुभ बोल–शुभ बोल भनिन् । घिरौंलाको पातमा चोखो भात तुलसीको मोठभन्दा थोरै पर राखि दिइन । तर काग उडेर गयो ।
न भन्दै मध्यान्हतिर फोन
आयो । विज्ञान एयरपोर्ट झरेछ घरमा फोन ग¥यो । आमाले फोन उठाउनु भयो । सन्चो विसन्चो सोधेर, बाबा खै त भन्यो “आमाले बजार गइस्या छ” भन्नुभयो । विज्ञान र आमाको फोनमा कुराकानी हुँदै थियो । त्यसै बखत आमाले भनिन् “बाबु निशा हस्पिटलको बेडमा जीवनमरणको दोसाँधमा छिन्” । विज्ञानले सहन सकेन अनि ममीसँग कुरा छिट्टै टुंग्याई फोनमा बिदा भयो ।
विज्ञानको तालु र कन्चटमा चिट्चिट् पसिना आयो । ओंठ मुख सुक्यो । आफैं मरौं झै भयो । लामो सास तान्दै “हे भगवान्…..रक्षा गर” भन्यो । अनि आधा सटर उघारेको पसल छेउ गइ बस्यो । पसलवाला दिदीलाई सोध्यो “दिदी पसल किन आधा खोलेको ?” ‘बन्द छ अरे मैले पनि बिहान थाहा पाएको ।’
उसले दुई हातले टाउको समातेर आँखा एकपटक चिम्लियो । उसको आँखाबाट असिनासरि बरबर आँशु खस्यो फेरि लामो सास तान्यो । पसलवाला दिदीले के भयो भाइ भनिन् । विज्ञानको दिमाग खाली
भयो । उसले केही सोच्न र भन्न सकेन । आँसु झारी रह्यो । एकछिनपछि उसले भन्यो “दिदी देशको स्थिति यस्तो छ, बन्द, हडताल, बेरोजगारी समस्या उही पहिलाको स्थिति सम्झयो । केही कमाउने आसमा विदेश गएँ । विदेशीले त धर्म छाडेछाडे नेपालीले पनि धर्म छाड्दै गएछन् । सुपरमार्केटको काम भनेको भेडी गोठालोको काम पारिदियो । भौतारिँदै आफ्नो देशमा केही गर्छु भनी आउँदा फेरि देश बन्दी ! त्यसमा पनि आफ्नो छुट्टै पीडा । अचानक बन्दले सारा नेपालीले बन्दको चपेटामा रुमल्लिएको थियो । कति जनता भोकै होलान्, भरिया दाइ पनि काम नपाइ लट्ठीएर सुते होलान् । सारा नेपालीलाई सास्ती दिने काम यो जनतालाई चाहिँदैन ऊ भन्दै थियो ।
उसले आफ्नो लगेज त्यही राखिदिन अनुरोध ग¥यो । दिदीले “हुन्छ” भनिन् । उसलाई ठूलो सहयोग झैं लाग्यो ।
उसले निशाको मोबाइलमा फोन ग¥यो । निशाको बाबाले फोन उठाउनु भएको रहेछ । “बाबा म निशाको साथी विज्ञान एयरपोर्टमा छु ।
उनको अवस्था कस्तो छ ? कुन अस्पतालमा छिन्” ।
निशाको बाबाले भन्नुभयो, अवस्था अलि गम्भीर छ, टिचिङ्ग अस्पतालमा आईसीयुको बेड नं. २५ । विज्ञानको होस हवास उड्यो । कसरी अस्पताल पुगँु झैँ भयो ।
निशाको बाबाले निशालाई भने “छोरी तिम्रो साथी विज्ञान एयरपोर्टमा आइपुगेछन्, अहिले उनी यहाँ आउँदैछन्” । सायद निशाले चाल पाइन् कि पाइनन् । केही समयपछि निशाले विज्ञान भनिन् उही पहिलाको लबजमा ।
बाबाले बन्द छ, विज्ञानलाई आफै गएर ल्याउने विचार गरे । विज्ञानलाई अघि आफूलाई गरेको फोनमा फोन गरी त्यही बस्न भने । एम्बुलेन्स लिएर उनी गए । एम्बुलेन्स नारायण गोपालचोकहुँदै विमानस्थलतिर मोडियो । निशाको बाबाले सोचे– ‘विज्ञानलाई भेट्ने अन्तिम इच्छा गर्नु, यी दुईको प्रेम सम्बन्ध रैछ कि ।’
विज्ञानले घरमा फोन गरी बिरामी निशा भेटेर आउने आमालाई जानकारी गराउँदै फोन राख्यो । एम्बुलेन्स त्यही आइपुग्यो । विज्ञान निशाको बाबासँगै अस्पताल फर्कियो । होटलवाला दिदी नरमाइलो मानेकी थिइन् उनको कुराले । बाटोमा जाँदा विज्ञानले सब वृतान्त सोध्यो । निशाको बाबाले सबै बेलीविस्तार लगाए । विज्ञानले मनमनै सोच्यो, आफ्नो र उनको प्रेम सम्झ्यो । उनको विवाह अन्तै गरिदिन लागे कि भनी गहिरो सोचाइले के गरौं र कसो गरौं भइ हिँड्न खोज्दा अचानक लड्न पुगिन कि ? सायद जसको कारण आज अस्पतालमा छिन् ।
यत्तिकैमा निशाको बाबाले भने “के सोचेको बाबु” उसले कुरा मोड्दै भन्यो– “बाबा सँगैको साथी यस्तो अवस्थामा पर्नु, म विदेशबाट आउनु, अनि उनले मलाई नै खोज्नुले संयोगवस भए पनि सारै नरमाइलो ला’छ । उनले मलाई कति सच्चा साथीको रुपमा खोज्दी रहेछिन् ।”
एम्बुलेन्स अस्पताल पुग्यो । विज्ञान निशाका लागि केही लिन क्यानटिनतिर गयो । क्यानटिनबाट साबुदाना र मसरुमको सुप लिएर बेडतिर लाग्यो । उनलाई पाइपबाट अक्सिजन दिइएको थियो । स्लाईन लगाइएकोे थियो । निशाकी आमा इन्तु न चिन्तु भई बसेकी थिइन् ।
उनले विज्ञानलाई देखेपछि रुँदै अँगालिन पुगिन् र भनिन् “बाबु मेरो निशालाई के भयो, डाक्टरलाई भन्देऊ कहिले निको हुन्छ भनेर” निशाको आमा त्यसरी रुँदा छिमेकीको आँखामा आँसु टिल्पिल–टिल्पिल थियो । विज्ञानको आँखाबाट आँसु खस्यो र आमालाई ढाड्स दिँदै “ममी निशालाई म जहाँ लगेर पनि बचाउँछु, हजुरले चिन्ता न लिनु ।”
“निशा मलाई चिन्यौ” विज्ञानले भन्यो । निशाले बर्रर आँशु झारिन् । बोल्न सकिनन् । सायद विज्ञानलाई चिनेर होला निशाले केही खान
खोजेझंै गरिन् । विज्ञानले सुस्तरी साबुदानाको रस र मसरुमको सुप चम्चाले थोरै खुवाए ।
फेरि उनले केही इशाराले विज्ञानलाई त्यहिँ बेडमा बस् भनेझैं गरिन् । विज्ञान उनकै छेउ कुर्सीमा बस्यो । विज्ञान कहिले गोडा मिची दिन्थ्यो, कहिले पाखुरा अनि कपाल मिलाइ दिन्थ्यो । घरिघरि ऊ प्रेमका कुरा सम्झी निशाको छेउ घोप्टोपरि आँसु झार्दैथियो ।
निशालाई अलि चापेझैं भयो । स्याँ–स्याँले, अलि बढी हिक्क–हिक्क गरिन् । विज्ञानले ड्युटीवाला सिस्टरमार्फ् डाक्टरलाई बोलाउन लगायो । निशाले मुख बङ्ग्याउँदै चलाइन् उनको नाडी र शरीरको ताप गुम्दै गयो । फेरि मुख चलाइ एकोहोरो हेरिन् । डाक्टरले भन्नुभयो “उनको अन्तिम अवस्था भयो ।” अन्तिम अवस्थामा सबैले पानी खुवाए । निशाले तनक्क खुट्टा तानिन्, एकोहोरो हेरिरहिन् । उनको प्राण आँखाबाट गयो ।
निशाको आमा डाँको छोडेर रुँदै थिइन् । छिमेकीले उनलाई सम्झाउँदै थिए । निशाको बाबा र निशाको दाजुको गहभरि आँसु थियो । विज्ञान पागल प्रेमीझैं थियो तर आफ्नो प्रेम भएकोे भन्न सकिरहेको थिएन । “बा–आमाले प्राणभन्दा प्यारी छोरी गुमाए । दाजुले बहिनी गुमाए, भने मैले सच्चा प्रेमी गुमाएँ” विज्ञान सोच्दै थियो । उनीहरुको प्रेम अधुरो भयो । गाउँमा खबर भयो, सबै जना आए । अन्तिम संस्कारका लागि आर्यघाट लगियो । यो सब कुरा विज्ञानलाई सपनाझैं तर विपनामा साक्षी थियो । ऊ टोलाउँदै आफ्नो गन्तव्यहीन दिशातिर लाग्यो ।